Home News DEG DEG: Ciidamo Boolis Iyo Nabad Sugid Ah oo Maanta Ku Dagaalamay...
DEG DEG: Ciidamo Boolis Iyo Nabad Sugid Ah oo Maanta Ku Dagaalamay Magaalada Muqdisho
Wararka naga so garayo manta magaalada muqdisho aya shegaya in duhurnimada manta ay uu dagaal dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowlada soomaaliya.
Ciidamadan aya la shegay in ay ku dagalameyn inta udhaxeysa isgoyska Banaadir iyo isgoyska seybiyano oo ka mid ah Isgoysyada ugu saxmada badan magaalada muqdisho.
Askarta dagaalamay aya la shegay in kala aheyen ciidamo Boolis ah iyo kuwa NISA ee nabad ilaalinta iyo sirdoonka,waxana la shegay in dagaalkaasi uu ka dhashay isfahan waa soo kala dhex galay ciidamadaasi.
Wararka aya shegaya in weerarkaasi uu ka dhashay wex yeelo soo kala gaartay ciidamadaaasi dagaalamay,waxana warku shegayan in ciidanka booliska halkasi loga dhawacay ila sedex askari.
Sido kale warar anu helnay aya shegaya in ruux sitay gaari Suruf ah ay toogteyn ciidamada dowlada ee halkasi ku sugan,waxana wararku shegayan in ruuxa la dilay uu j=kolkii hore uu diiday in uu istaago sidasi ay sababtay in la toogto.
Sikastaba ha ahate Waxa sii kordhaya malmahan weerarada ka dhex dhaca ciidamada kawada tirsan dowlada ee ku dagalama isgoysyada muhiimka ah ee dadku kukala gooshaan,iyado aysan jirin dowlad arimahaasi wax iska weydiisa ama saraakiil lo so xiray weerarada nuucaan ah.